Football Khabar » मेक्सिकोविरुद्ध पहिलो हाफमै मार्टिन्जले हाने ह्याट्रिक !
मेक्सिकोविरुद्ध पहिलो हाफमै मार्टिन्जले हाने ह्याट्रिक !
अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा अहिले अर्जेन्टिना र मेक्सिको खेलिरहेका छन् । जारी खेलको पहिलो हाफमा अर्जेन्टिनाले ४–० को फराकिलो अग्रता लिएको छ । अर्जेन्टिनाका लागि पहिलो हाफमै लौटारो मार्टिन्जले ह्याट्रिक गरेका छन् ।
उनले खेलको १७, २२औं र ३९औं मिनेटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक गरेका हुन् । अर्को १ गोल ३३औं मिनेटमा लियान्ड्रो पाराडेसले पेनाल्टीबाट गोल गरे । जारी खेलमा अर्जेन्टिनी टोलीमा धेरैजसो दोस्रो रोजाइका खेलाडीलाई उतारिएको छ ।
प्रकाशित मिति २५ भाद्र २०७६, बुधबार ०२:५९